Mofon’aina – TALATA 14 NOVAMBRA 2017 – Athis Fanantenana
Mofon’aina – TALATA 14 NOVAMBRA 2017
19 Hoy ravehivavy taminy: Tompoko, hitako fa mpaminany Ianao.20 Ny razantsika nivavaka teto amin’ ity tendrombohitra ity; fa ianareo kosa milaza fa any Jerosalema no tokony hivavahana.21 Hoy Jesoa taminy: Ravehivavy, minoa Ahy, fa avy ny andro ka tsy amin’ ity tendrombohitra ity, na any Jerosalema aza, no hivavahanareo amin’ ny Ray.22 Ianareo mivavaka amin’ izay tsy fantatrareo; izahay kosa mivavaka amin’ izay fantatray, satria avy amin’ ny Jiosy ny famonjena.23 Fa avy ny andro, sady tonga ankehitriny, raha ny tena mpivavaka hivavaka amin’ ny Ray amin’ ny fanahy sy ny fahamarinana; fa ny Ray koa mitady ny mpivavaka Aminy ho tahaka izany.24 Andriamanitra dia Fanahy; ary izay mivavaka Aminy tsy maintsy mivavaka amin’ ny fanahy sy ny fahamarinana.25 Hoy ravehivavy taminy: Fantatro fa avy ny Mesia (Ilay atao hoe Kristy); ka rehefa tonga Izy, dia hambarany amintsika ny zavatra rehetra.26 Hoy Jesoa taminy: Izaho Izay miresaka aminao no Izy.
JAONA 4 :19-26
I JESOA IZAY ANDRASANA
Nitory tamin’ny vehivavy Samaritana iray i Jesoa. Niezaka nandresy lahatra Izy. Nambarany tamin’ity vehivavy ity ny marina : nampahafantatra i Jesoa fa :
1-Izy no tsy maintsy inoana (and 21)
Maneke Ahy , matokia Ahy . Tarihin’ny Tompo ho amin’izany ity vehivavy miresaka Aminy ity . Ny mahazatra azy mantsy dia ny mivavaka amin’izay andriamanitra tsy fantany. Hitany ankehitriny Ilay Andriamanitra tokony inoana ka dia taomin’ny Tompo izy handray ny fanambarany, minoa ahy ,hoy i Jesoa . Anio no itaoman’ny Tompo antsika mba hino Azy sy ny fanamabarany. Atsaharo hatreo ny finoanoam-poana . Mampahafantatra ihany koa i Jesoa fa:
2-Andriamanitra irery ihany no ivavahana
Ny tena mpivavaka dia izay mivavaka amin’ Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy. Lamina efa napetrak’ Andriamanitra hatrany amin’ny andron’ny Testamenta Taloha izany. « Aza manana andriamaninkafa fa Izaho ihany », hoy Izy (Eks 20 :3). Misafidiana hivavaka amin’ Andriamanitra Rain’i Jesoa Kristy ary aoka, hivavaka Aminy amin’ny fanahy sy ny fahamarinana marin tokoa isika mandra-piavin’ny Tompo . Na iza na iza dia samy antsoin’i Jesoa hivavaka amin’ny Ray amin’ny fanahy sy ny fahamarinanan sy hino Azy ho ny Mpamonjy.
Hatraiza no hanekena ny filazan’ny sasany hoe: Andriamanitra iray ihany no ivavahana?